नेपाल पुगेर पनि सम्पर्क गरिरहन्छु नी — News of The World
'फर्कने सोच बनाउनु भयो की यतै बस्ने सुरसारमा हुनुहुन्छ ?’
धेरै वर्षपछि भेट हुन पाइयो, के छ नेपालको हालखबर’ कामरेड शन्तोष शर्मातर्फ फर्कदै ह्यारी अधिकारीले सोधे ।
‘कहिले आइपुग्नु भयो रे कामरेड ? कति दिनको बसाइ छ यो शहरमा ! अनि कहाँ कहाँ घुम्न जाने प्लान छ ?’ कमरेड कनैयाले प्रश्न थपे ।
‘तपाइ कुन भिषामा आउनु भयो कामरेड, भीषा सजिलै दियो त ?’ कामरेड नहकुलले जिज्ञासा राखे ।
‘खास कुन काममा आउनु भएको थियो । फर्कने सोच बनाउनु भयो की यतै बस्ने सुरसारमा हुनुहुन्छ ?’ कामरेड अभ्यासले सोधे ।
‘सपनाको स्वर्ग भनेपनि, धनी देश भनेपनि तपाई यहाँ आइसक्नु भयो, भन्नुस त तपाइलाई कस्तो लागिरहेको छ ?’ अन्तवार्ताको शैलीमा कामरेड सुनिताले सोधिन ।
‘जे भए पनि आउनु भयो, देख्न पाइयो, बस्नु नबस्नु त आफ्नो ठाउँमा छदै छ, ल वाइन पिउँदै गफ गरौं न त’ कामरेड महेन्द्रले प्रस्ताव गरे ।
‘हेर्नुस कामरेड म नितान्त नीजि भ्रमणमा पारीवारिक हिसावले केही दिनभित्रै देश फर्कने गरी आएको छु । मन मिल्ने साथीहरुसँग भेट हुन पाइयो यसका लागि कामरेड महेन्द्रलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।’ कामरेड शंतोष शर्माले आभार व्यक्त गरें ।
‘आइहाल्नु भयो कामरेड, अब यतै बसौं । त्यहाँ पनि के पाउनु भएको छ र राजनीतिमा पनि न्याय पाउनु भएन, सरकार आउँदा पनि नियूक्ति पाउनु भएन । गोता–हण्डर–ठक्कर, जेल र कठोर यातना भोग्नु भयो अहिले पनि हातमा लाग्यो शून्य नै छ । बरु यतै बस्नुस । हामी १५ देखि २५ लाख सम्म तिरेर यहाँ आएका साथिहरु पनि छौं । मौका नगुमाउनुस, ठूलो नपल्टीनुस’ कामरेड हरिहरले वाइन ठोक्याउँदै सुझाव दिए ।
‘तपाई, कहिले आउनु भएको हो कामरेड कति कमाउनु भयो र कति जम्मा गरेर नेपाल पठाउनु भयो अनि यहाँ के कति धन सम्पत्ती जोड्नु भयो…?’ कामरेड शंतोष शर्माले देब्रे दीर्घाबाट जिज्ञासा शुरु गरे ।
‘हेर्नुस कामरेड म सन् २००४ मा नेपालबाट आए । २ पटक यातना भोगे । जेल बसे, पार्टी कमिटी बनाउँदा न्याय पाइन । ससुरालीले पैसा खोजिदिए । उतीबेलै दलाललाई १२ लाख बुझाएर १३ देशको ठक्कर खादैं पानी जहाज र जंगलको बाटो आएं । शुरुको दुःखमा त व्यर्थै आएछु, उतै शहिद भएको भए हुने भन्ने लाग्यो । पछि बाटोबाट उतै फर्कन पनि सकिन । देशभित्र विद्रोहीको कलंक, पार्टीभित्र न्यायको अभाव दुवै बाध्यताले मलाई जंगल, पानी जहाज र कन्टेनरमा घुँडा लुकाई गर्न विवश बनायो । म आए, राज्यले लखेटेको मैले अन्यथा भनेर शरणार्थी प्रक्रियामा गए । मन कति दवाएको थिए हँुला आफै अनुमान गर्नुस । जहासम्म अमेरिकाको धन सम्पत्तीको प्रश्न हो, मैले ससुरालीको ऋण तिर्ने बाहेक अरु पैसा नेपाल पठाउनै सकेको छ्रैन् । पहिला आफ्नो कागजको प्रक्रियामा खर्च गरे । त्यपछि बालबच्चा र श्रीमती ल्याउँन खर्च भयो । यहाँ गाडी किन्ने र चढ्ने सामान्य कुरा भयो, स्वास्थ्य बिमा महंगो छ । अलिक वर्षपछि एउटा घर किनौं भन्ने लाग्यो र घर पनि किन्यौं । मोर्गेज (किस्ता) को कुरा थाहा छ नै हाला तपाईलाई । गाडी, घर र इन्स्युरेन्स अनि पारीश्रमिकको चर्को कर गर्दा यहाँको पैसा सबै यतै बस्ने रहेछ । काठमाण्डुमा घर किनु–किनु नलागेको होइन, तर ४ वर्षदेखि जसो गर्दा पनि आट्न सक्ने स्थिति नै बनेन् ।’ कामरेड फणिन्द्रले बेलिविस्तार लगाए ।
‘म, सन १९९९ मै आएको हुँ । सशस्त्र जनयुद्धले आकार थाल्दै थियो । पार्टीभित्रको एउटा अन्तरसंघर्षमा मेरो कुरा सुनुवाई नभैरहेकै बेला दाइलाई दुश्मनले जेल हाल्यो । मलाई खोजी ग¥यो । भारत गएं, भारतमै काम गर्ने मामाको सहारामा आँपटारीको जग्गा बेचेर दिल्लीका दलालमार्फत यता आइपुगेको हो । मेरो आस्था अटल छ । तर, के गर्ने नेताहरु विग्रेको देख्दा र देशमा फर्कने वातावरण नबनेको देख्दा नेपाल जाने रुची जागेको छैन…’ बढी दोष नदिइकनै कामरेड इन्द्रमणिले कुरो राखे ।
‘म त कामरेड भर्खरै भनेपनि हुन्छ । सन २०१२ मा अमेरिका छिरेको हुँ । नेपाल छदां जम्बो राज्यकमिटीको एक सदस्य म पनि थिए । जेलनेल भोगेको र मास्र्टस सम्म पढेको शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत मसँग थियो । पार्टी सरकारमा गयो । आशा त लाग्ने नै भयो । २० वर्ष काम गरेको पार्टीले कुनै ठाउँ देला नी भनेर नेता र मन्त्रीहरुका धाएं । कुन–कुन ठाउँमा संभव होला भनेर भौतारिदैं खाली ठाउँहरु पत्ता लगाए, तर, मोटो रकम लिन नमिलेकाले मलाई गरेनन् । आँखै अगाडि विभत्स र कुरुप चरीत्र देखेपछि कति पछि लाग्ने भन्ने मनमा आयो । कता जाउँ भन्दा भन्दै अमेरिकाको एउटा मेलाका लागि १६ लाख खर्च गरेर ल्याउने दलाल भेटे । स्मार्ट ढङ्गले अन्तर्वार्ता दिएर पैसा बुझाएरै अमेरिका आएको हुँ । यहाँ आएपछि त प्रक्रिया नगरी बस्नुको विकल्पै थिएन, धेरै कुराहरु त कामरेड इन्द्रमणिले भनिसक्नु भएको छ’ कामरेड अभयले आफ्नो कुरो राखे ।
‘यो भेट पनि निकै ठूलो कुरा भयो कामरेड, बुझ्न सजिलो पा¥यो । पुराना साथि भेट हुन पाइयो…, म नेपाल पुगेर पनि सम्पर्क गरिरहन्छु नी,’ कामरेड शंतोषले भनाइ छोट्याए ।
ऐक्यबद्धता मासिकको जेठ अंकमा प्रकाशित शन्तोष शर्माको कामरेडको नेपालपथ